के हो कन्ट्याक्ट लेन्स, कसरी प्रयोग गर्ने? :: Setopati
कन्ट्याक्ट लेन्स एक पातलो लेन्स हो, जो आँखाको सतहमा लगाइन्छ। कन्ट्याक्ट लेन्स आँखाको विभिन्न दृष्टि दोष निवारणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले चश्माले जस्तै आँखाको दृष्टि दोषलाई हटाई दृष्टि प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। यसले चश्माबाट हुने असुविधाको समाधान गर्दछ।
यसले दृष्टिमा सुधार ल्याई पारिधिक क्षमताको वृद्घि गर्दछ। यसले चश्मामा हुने असुविधाहरूको निर्क्यौल गरी दृष्टिमा गुणात्मक परिर्वतन ल्याउँदछ। त्यसैले, चश्माको धेरै पावरबाट हुने दोषको पनि समाधान गर्दछ। यसले मानिसको सुन्दरतालाई अझ कायम राख्न मद्धत गर्दछ। चश्माको कारणले ओझेलमा परेको सुन्दरतालाई प्राकृतिक रुपमा कायम राख्दछ।
उचित ढंगले प्रयोग गर्ने, ख्याल गर्ने हो भने, यो सुरक्षित र प्रभावकारी हुनसक्छ।
आफ्नो आँखा कमजोर भएको अरूलाई थाहा नहोस् भनेर मानिसहरूले कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्छन्। राम्ररी लगाउन नजानेमा आँखाको नानीमा घाउ लाग्ने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ। त्यस्तै, आँखाको नानीमा दाग बसेमा आँखामा संक्रमण हुनुका साथै दृष्टी गुम्नेसम्मको खतरा हुन्छ।
अहिले धेरैको आँखा नियाल्नुहोस्, चश्मा पहिरिएको देख्न सकिन्छ। बालबालिकामा त यो समस्या थप देखिन्छ। अहिलेका बालबालिकाहरुको दृष्टि कमजोर हुँदै गएको छ। जब आँखाको दृष्टि कमजोर हुँदै जान्छ, त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि चश्मा प्रयोग गरिन्छ। चिकित्सकको परामर्शमा चश्मा लगाइन्छ। चश्माले कतिपय अवस्थामा दृष्टिमा सुधार पनि ल्याउन सक्छ। तर, चश्मा लगाउन त्यति सजिलो भने हुँदैन। यो केही न केही झन्झटिलो हुन्छ। फुट्ने, हराउने भय पनि हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा कन्ट्याक्ट लेन्स राम्रो विकल्प हुनसक्छ, चश्माको। यसले चश्मामा भन्दा अपेक्षाकृत राम्रो देखिने हुन्छ। साथै झुक्दा वा खेल्दा, झर्ने, हराउने, फुट्ने भय हुँदैन। तर, जसलाई बानी छैन, उनीहरुलाई कन्ट्याक्ट लेन्समा अभ्यस्त हुन सजिलो छैन।
कन्ट्याक्ट लेन्सको मद्दतले आँखाको दृष्टि प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। तर, आँखाको पावर धेरै भएमा वा आँखाको पावर डिग्रीमा नापिएको अवस्थामा मात्र कन्ट्याक्ट प्रयोग गर्नुपछ।
कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्नु अगाडी दुवै हात राम्ररी साबुन पानीले धुनुहोस्।
कन्ट्याक्ट लेन्सलाई धुनको लागि त्यसकै निर्धारित सोलुसन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
‌औंलाका सबै नङहरू काटेर सफा राख्नुहोस्।
कन्ट्याक्ट लेन्सलाई लेन्स केसमा स्टोर गर्दा दैनिक रुपले सोलुसनलाई बदल्नु होस्।
कन्ट्याक्ट लेन्स केही गरी भुइँमा खस्यो भने औंला भिजाएर विस्तारै टिप्नुहोस्। लेन्सलाई सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने सतहमा दाग पर्न सक्छ।
कन्ट्याक्ट लेन्सको भित्री भाग चिनेर ठिकसँग लगाउनुहोस्। बाहिरी भागभित्र नपरोस्।
कन्ट्याक्ट लेन्स लगाइसकेपछि स्पष्ट देखिएको छ कि छैन, आरामदायी लागेको छ कि छैन, आँखा रातो त भएको छैन, राम्ररी ख्याल गर्नुहोस्। केही समस्या देखिएमा तुरून्त लेन्सलाई निकाल्नुहोस्, अनि आँखा विशेषज्ञलाई देखाउनुहोस्।
कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउँदा आँखा नामिच्नुहोस्।
निर्धारित समयभन्दा धेरै समयसम्म लेन्सको प्रयोग नगर्नुहोस्।
कन्ट्याक्ट लेन्स लगाएर कहिल्यै नसुत्नुहोस्।
आँखा रातो भएमा, दुखेमा, वा स्पष्ट नदेखिएमा कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग नगर्नुहोस् अनि तुरुन्त आँखा विषेशज्ञलाई देखाउनुहोस्।
कन्ट्याक्ट लेन्स लगाएर पौडी खेल्नु, आगोको छेउमा बस्नुजस्तो काम नगर्नुहोस्। लेन्स लगाउने बानी नपरेसम्म कुनै खेलकुद नखेल्नुहोस्।
निर्धारित सोलुसनबाहेक अरुले लेन्स सफा नगर्नुहोस्। धाराको पानीले सफा गर्दा इन्फेक्सन हुने खतरा हुन्छ।
कन्ट्याक्ट लेन्सलाई विभिन्न तरीकाले बाहिर बाट रंगाउने प्रयास नगर्नुहोस्।
एउटै कन्ट्याक्ट लेन्सलाई अरु कसैसँग व्यवहार नगर्नुहोस्। यसले कीटाणुको संक्रमण हुनसक्छ र राम्ररी लगाउन नजानेमा आँखाको नानीमा घाउ लाग्ने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ। त्यस्तै, आँखाको नानीमा दाग बसेमा आँखामा संक्रमण हुनुका साथै दृष्टी गुम्नेसम्मको खतरा हुन्छ।
के कुरामा ख्याल गर्ने?
जब तपाईं कन्ट्याक्ट लेन्स उपयोग गरिरहनुभएको छैन भने, यसको राम्ररी ख्याल गर्नुपर्छ। यसमा दुई कुरा छन्।
यदि तपाईं डिस्पोजेबल कन्ट्याक्ट लेन्सको उपयोग गर्न पाइरहनुभएको छैन भने आफ्नो कन्ट्याक्ट लेन्सलाई लेन्स सलुसनमा राखौं। कन्ट्याक्ट लेन्स सलुसनले तपाईंको कन्ट्याक्ट लेन्सलाई सफा तथा किटाणुरहीत राख्नमा मद्दत मिल्छ।
निर्धारित अवधिसम्म कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गरौं। धेरैजसो लेन्स यी तीनमध्ये कुनै एक श्रेणीमा आउँछ। डिस्पोस डेली, डिस्पोस सेमी-विक्ली, डिस्पोस मन्थ्ली। आफ्नो कन्ट्याक्ट लेन्सको निर्धारित अवधि जाँच गरौं र त्यस अवधिपछि कन्ट्याक्ट लेन्सको उपयोग गर्न बन्द गरौं।
कसले लगाउनु हुन्न ?
अधिकांश व्यक्तिको दृष्टिमा सुधार आवश्यक हुन्छ, उनीहरूले कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउन सक्छन्। तर, निम्न परिस्थितिमा कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउनु उपयुक्त हुँदैन।
पटक-पटक आँखाको संक्रमण हुने
धेरै धुलोयुक्त वातावरणमा काम गर्नेले
सही ढंगले लेन्सको ख्याल गर्न नसक्नेले
यस्तो अवस्थामा चिकित्सकलाई भेट्नैपर्छ
लेन्स प्रयोग गर्दा आँखा रातो भएमा
आँखा सुख्खा भएमा
आँखामा चोट लागेमा
कसमेटिक्सको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने
दिनदिनै सफा गर्नुपर्ने
सानो भएकोले हराउने खतरा बढी हुने
फोहोर ठाउँमा लगाउन मिल्दैन
आँखा सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूमा लगाउन नमिल्ने
वायु प्रदुषणमा लगाउन नमिल्ने
आँखामै टाँसिएर बस्ने हुँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने
कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्दा माथि उल्लेखित समस्या देखिएमा तुरुन्त चिकित्सककहाँ सुझाव लिनैपर्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १५, २०७७, ०४:०६:००
गर्भवतीलाई किन देखिन्छ सुगर र थाइराइड, कसरी नियन्त्रण गर्ने?